Xiddiga xulka qaranka Talyaaniga iyo Tababarahooda oo bukaanno ku booqday Isbitaalka carruurta… + SAWIRRO – Gool FM
(Rome) 11 Okt 2019. Xiddigaha xulka qaranka Talyaaniga iyo Tababarahooda Roberto Mancini ayaa bukaanno ku booqday Isbitaalka carruurta ee ku yaala magaalada Rome, iyagoo qoysaska carruurtaas iyo kalkaaliyeyaasha isbitaalkaba lagu casuumay kulanka soo aaddan ee uu xulka Italy la leeyahay Greece.
Xulka Azzurri ayaa xaqiijisan karta booskooda Euro 2020 haddii ay guul gaaraan kulankii Sabtida berri ah ka dhacaya garoonka Stadio Olimpico ee Magaalada Rome.
Bukaannada ku jira Isbitaalka carruurta ee Bambin Gesù ee magaalada Rome waxaa booqday ciyaartooyda Nazionale iyo Tababare Mancini waxaana ay u geeyeen haddiyado iyo Games-ka lagu ciyaaro.
Carruurta ayaa sidoo kale la siiyey funaanado saxiixan oo kubadda cagta ah, halka maaliyadaha tababarka ay tuseen kuwaasoo ay xulka Talyaanigu u isticmaali doonaan iskululeynta ka hor kulanka Sabtida.
Talyaanigu waxay sidoo kale u qoondeeyeen in ka badan 5,000 oo tikidhada lagu geli doono garoonka Olimpico inay siiyaan xubnaha qoyska, bukaannada loo ogol yahay inay isbitaalka ka baxaan maalintaas, kalkaaliyayaasha caafimaadka, shaqaalaha iyo mutadawiciinta isbitaalka ku jira.
Sidoo kale Lambar taleefan ayaa loo sameeyay si loogu oggolaado inay helaan tabarucaadyo sahlan inta lagu jiro ciyaarta ay Talyaanigu la leeyihiin Greece.